Tababaraha Cusub Ee Barcelona Xavi Oo Daaha Ka Qaaday Qoraal Uu Ka Helay Lionel Messi
HomeWararka CiyaarahaTababaraha cusub ee Barcelona Xavi oo daaha ka qaaday qoraal uu ka helay Lionel Messi
November 8, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Tababaraha cusub ee Barcelona Xavi ayaa daaha ka qaaday inuu ka helay Lionel Messi qoraal u qornaa sidan “nasiib wanaagsan” ka hor inta uusan ku soo laaban kooxda, isagoo sidoo kale ka hadlay isbarbardhigga isaga iyo Pep Guardiola.
Xavi ayaa ka bedelay Ronald Koeman Camp Nou usbuucii hore ka dib markii uu joojiyay qandaraaskiisa Al Sadd, iyadoo Barca ay u weecantay halyeey kooxeed si uu uga saaro bilowga xun ee kooxda.
41-sano jirkaan oo ku riyaaqay waayihiisa koobab ee Catalunya isagoo ciyaaryahan ah, ayaa saaxiibkiisi hore iyo saaxiibkiis Messi u rajeeyay inuu ku wanaagsanaado booskiisa cusub, laakiin kama qoomameynin inuu luminayo fursad uu tababare ugu noqdo. ninka lix jeer ku guuleystay Ballon d’Or.
Markii la weydiiyay haddii uu jeclaan lahaa inuu maamulo Messi, kaasoo ka tagay Camp Nou 21 sano ka dib xagaagii ka hor inta uusan ku biirin Paris Saint-Germain, Xavi ayaa u sheegay suxufiyiinta isniintii Haa sida: “Messi, [Samuel] Eto’o, Ronaldinho, Dabcan, laakiin halkan ma joogaan. Messi waa saaxiib weyn, wuxuu ii soo diray fariin nasiib wacan. Laakiin kama fikiri karno ciyaartoyda aan halkan joogin.”